Nnweta Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa site na Ngwaọrụ Ahịa | Martech Zone
N’ọnwa gara aga Zoomerang sonyeere Martech Zone dị ka anyị technology nkwado. Anyị enweela ọmarịcha iji ha mfe nnyocha e mere ngwaọrụ na, nke ka nke, ịmụ otu esi hazie ntuli aka na nyocha nke rụpụtara nsonaazụ. Ọ bụ rue mgbe mkparịta ụka anyị na ndị ukwu nọ na otu ha ka anyị matara na Zoomerang karịrị naanị azịza nyocha.
Isi ụlọ ọrụ Ngwaọrụ Ahịa awade imewe na mmezu ọrụ maka nnyocha. Maka ihe ruru $ 1499, ndị na - agụ blọgụ Martech nwere ike iji ọrụ Ngwaọrụ Market. Ngwaọrụ Ahịa nwere ihe karịrị nde mmadụ abụọ na njikere… ị nwere ike ịkekọrịta ha ma ọ bụ ma ọ bụ ọdịdị ala! Nke ahụ bụ nnukwu ọnụ ahịa Ọrụ Nchọpụta Ahịa!